सरस्वती पाण्डे 'सरस'/मलाई ममीको काखमा बसेर गरेको यात्राको कुनै याद छैन् । याद छ त, त्यस्तै ८, ९ वर्ष हुँदा गरेको केवल एक यात्रा । साबिकको नौबिसे गा.वि. स. कानाकोटको घरबाट दशैँको किनमेलका लागि ममी र म घरबाट काठमाडौँ जाने भएका थियौं । ममीले अघिल्लो दिन 'भोलि चाडैं उठ्नुपर्छ है किनमेलका लागि काठमाडौँ जानुपर्छ ।' ममीले त्यसो भनेदेखि मलाई भोलि कहिले आउला भनेर छटपटी भएको थियो । त्यो छटपटीको राज गाडी चढ्न पाइन्छ भन्ने थियो ।
२० वर्ष पहिले गाडीको धेरै महत्त्व थियो । महत्त्व त आज पनि उत्तिकै छ । तर, त्यतिखेर विशेषखालको महत्व थियो जस्तो लाग्छ । घरमा हजुरममीले हाम्रा पालामा कतै जानु पर्दा हिंडेर जानुपर्थ्यो । पशुपति जाँदा कति दुःख पाइयो । मनलगेको खानेकुरा सकिएर, आफू हिँड्न नसकेर गाह्रो हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘अहिले तिमीहरूलाई कति आनद छ !’ सुन्दा मलाई अचम्म लाग्थ्यो । त्यसैले विशेष भएको होला । भृकुटीमण्डपबाट गाडी चढेर खुसी हुँदै गइयो । आफूलाई मन परेको कपडा पनि रोजियो । अरूलाई चाहिँ यो ठीक हुन्छ होला भनेर अड्कल गरेर किनियो । अलि महङ्गो कपडा छानेकोमा मैले गाली पनि खाएको थिएँ । सबै छोराछोरीलाई बराबर हुनुपर्छ तँ मात्र होस् र भनेर ममीले भन्नु भएको थियो ।
त्यो समयमा काठमाडौँमा भृकुटिमण्डपभन्दा ठूलो बजार अन्त छैन् होला जस्तो लाग्थ्यो । भित्र पसेपछि बाहिर निस्किनै अलमल हुन्थ्यो । अहिले पनि हुन्छ कतिपय ठाउँमा । सम्झिदा हाँसो लाग्छ, बाल्यकालका मिठा यादहरूमा भृकुटिमण्डप पनि पर्छ । हामीले कपडा किनेर बाहिर निस्कँदा समयले नेटो काटिसकेको रहेछ । हतार हतार रत्नपार्कबाट गाडि चढेर कलंकी आयौँ । ममी ढिलो भयो भनेर आँत्तिरहनु भएको थियो तर म भने गाडी चढ्न पाएकोमा आफ्नै दुनियाँमा रमाइरहेको थिएँ । हामी कलंकीबाट फेरि गाडि चढेर घर तर्फ अगाडि बढ्दै थियौँ । ममी अरू मानिसहरूसँग आज रात पर्ने भयो समय गएको पत्तै पाइएन भनेर गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो । म चाहिँ झ्यालबाट हेर्दै रमाइरहेकी थिएँ । सधैं गाडीभित्रै बस्न पाए पनि हुन्थ्यो, घर छिट्टै नआएपनि हुन्थ्यो भन्ने सोच आउँथ्यो । त्यतिखेर गाडी चढ्न कि बिरामी पर्नुपर्थ्यो कि त दशैँ नै आउनु पर्थ्यो, चढ्ने रहर किन नलागोस् ।
समय र परिस्थितिसँग लड्दै, जुध्दै जाँदा जन्मथलो कर्म थलो बन्न पुग्यो, आफैँले अध्ययन गरेको ठाउँमा अध्यापन गराउन पाउँदा । खुसी पनि लाग्छ तर हिंड्दा भएको असहज परिस्थिति गर्दा बाल्यकालको रहर कहरमा परिणत भएको छ । करिब ४ वर्षदेखि म कलंकीबाट नौबिसेको दैनिक यात्रा गरिरहेको छु । १०–४ बजेसम्मको ६ घण्टाको जागिर खान अर्को ५ घण्टाको समय छुट्याउनु पर्छ । २४ घण्टाको समयमा ११ घण्टा जागिर मै बिताउँदा घरमा समय दिन पाउने अवस्था छैन् ।
पहिला गाडि चढेपछि घर नआओस् जस्तो लाग्थ्यो अहिले कहिले आउला जस्तो लाग्छ । हिँडेर सम्भव नभएपछि दिक्क लाग्दो यात्रा गर्नु पीडादायिक बनेको छ । पावर र आफन्त हुनेहरू अन्यत्र टाढादेखि काठमाडौँमा सजिलै सरुवा भएका छन् । शक्तिको पहुँचमा नपुग्नेले जति प्रयास गरेपनि सफल नभइँदो रहेछ । देशका अगुवाहरू आफ्नो–आफ्नो भाग लगाउँदैमा व्यस्त छन् । सर्वसाधारणका समस्यालाई देखेर पनि अन्धो बनेर बसेका छन् । उनिहरूलाई कतै समस्या छैन्,दलबल सहित हिँड्छन् सडक खाली गराएर ।
वर्षौँको नागढुङ्गादेखि कलंकीसम्म पर्ने जामले सबैको जीवन अस्तव्यस्त बनाएको बुझेकी छु । राजाधानीबाट बाहिरिने मुख्य सडकको गति कहालीलाग्दो छ । १ घण्टाको यात्रामा ५ घण्टा लाग्ने भएपछि व्यक्तिगत जीवनमा पर्ने असरको बारेमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन् । समयले गर्दा कतिका महत्वपूर्ण काम हुन पाएका छैनन् । त्यसमा सरकारको चासो छैन् । दिनदिनैको मानसिक तनाबले दैनिक यात्रा गर्ने यात्रुको जीवनमा पु¥याएको चोटमा मलम कहिले लाग्छ पत्तो छैन् ।
'देशलाई स्वर्ग बनाउँछौँ ।' 'स्वीजरल्याण्ड बनाउँछौँ ।' 'विकासको नमूना बनाउँछौ ।' यस्ता शब्द हामीले नसुनेका पनि होइनौं । बरू सुन्दासुन्दा दिक्क भईसक्यौं । नेतृत्वले ल्याएका मुखौटे योजनाहरूले हिजोआज जनतालाई ग्यास्ट्रिक भएर अमिलो पानी आउन थालिसकेको छ । देश विकासको मुख्य औजार बाटोको अवस्था त अस्तव्यस्त छ । अन्त के आस गर्ने ? ग्यास्ट्रिक भएका जनताले सहज वातावरणको उपचार पाएनन् भने अल्सर भएर क्यान्सर हुने अवस्था नआउला भन्न के बेर ?
प्रकाशित १२ जेठ २0७५ , शनिबार | 2018-05-26 01:54:48